Andriamifidisoa Zo · Jolay 2011 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Jolay, 2011
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Jolay, 2011
Arabia Saodita: Ny mariazin'i #Tabukgirl
Tsy sambany tsy akory no nahitantsika lehilahy mampanambady ny zanany vavy tsy mbola ampy taona amina lehilahy efa voky taona, indrindra fa any Arabia Saodita sy any Yemen. Ho entin'i Mona Kareem amintsika ny tantaran'i #Tabukgirl [zazavavin'i Tabuk] sy ny adihevitra naterak'ity zazavavy noterena hanambady lehilahy efa 60 ity tany amin'ny valantserasera Saodiana.
Rosia: Misafidy ny sainan'ny tanànany ny bilaogeran'i Vladivostok
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Jolay 2011
As the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit of 2012 approaches, local authorities of the Russian maritime city of Raha manantomotra ny Vovonan'ny Fiaraha-miasa ara-toekarena Azia sy Pasifika (APEC) 2012, sahirana anaty fikarakarana Vladivostok, ny mpisera tia famoronana kosa nanoratra fa tsy manana saina ofisialy [ru] handraisana ny lanonana ny tanàna. Indreto ny sasany amin'izay novolavolaina hamenoana izany fahabangana izany.
Azia Atsimo 10 Jolay 2011
Mankalaza ny fahafolo taonany ny Wikipedia amin'ity taona ity ary saiky tanàna zato any India no nisoratra anarana handray ny fankalazana izany, isa avo indrindra amin'ny isam-pirenena. Amin'ity taona ity ny Fondation Wikimedia no hanokatra birao voalohany ivelan'i Etazonia, amina tanàna iray any India araka ny nambara. Ny Global Voices dia tafaresaka tamin'i Tinu Cherian, mpi-Wikipedia, momba ny Wikipedia any India.